Ireo lohasaha 10 manandanja indrindra eto an-tany | Vaovao momba ny dia
Monica sanchez | | Toerana fitsangatsanganana, General, mpitarika
Tiako ny lohasaha. Izy ireo dia fampisehoana voajanahary tena izy izay ahafahanao mirindra tanteraka amin'ny tontolo iainana: ny fihainoana ny feon'ilay toerana, ny fifohana rivotra madio sy madio, ary mandritra ny fakantsaranao no ahazoanao ireo zoro manokana indrindra, ireo izay mampihetsi-po anao amin'ny fihetsem-po.
Satria misy maro ary indrisy fa iray ihany ny fiainantsika mitsidika azy rehetra, hoy aho aminao izay lohasaha lehibe indrindra eto an-tany.
1 Lohasaha Incles
3 Lohasaha Porsmork
4 Lohasahan'i Rift Lehibe
5 Lohasahan'ny Mpanjaka
6 tsangambato Valley
7 Lohasaha Yosemite
8 Lohasahan'ny fahafatesana
9 Lohasahan'i Waipi'o
10 Lohasahan'i Danum
Hanomboka ny fitsidihantsika izahay amin'ny alàlan'ny fitsidihana ilay akaiky anay indrindra, ao Andorra. Ny lembalemban'ny Incles, mifanohitra amin'izay mety ho izy, dia mandray izay te-hiakatra ny tendrombohitra na handro amin'ny rano. Midira ao tsy ilaina ny fanomanana ara-batana lehibe, noho izany dia toerana mety indrindra ihany koa ho an'ny ankizy izay mety hahita marmot na chamois.
Any Frantsa no iantsoana azy io, avy amin'ilay renirano mandro ny moron'ny faritra rehetra: Loire. Tany voatahy izy ireo, satria faritra misy divay. Eto amin'ity faritra an'izao tontolo izao ity dia azonao atao ny mahita ny vondron'ny lapa frantsay, toa an'i Saint-Brisson na Clos-Lucé, izy rehetra dia natsangana nandritra ny Renaissance frantsay.
Raha manonofy mitsidika sy afaka mandro amin'ny geyser ianao ... dia tsy hadino ny Lohasahan'i Porsmork, Islandy. Mazava ho azy, mitandrema satria manana tany be vato io. SAINGY mahatalanjona ny tontolo, ka tena mendrika izany.
Lohasahan'i Rift Lehibe
Ao Afrika dia hitantsika ny Great Rift Valley, izay manana ny halavany 4830 kilometatra. Izy io dia mamindra ny faritry ny firenena isan-karazany, manomboka any Djibouti ka hatrany Mozambika. Io no toerana azonao aleha jereo ireo biby afrikanina dimy lehibe indrindra: ny liona, ny leoparda, ny elefanta, ny rhinoceros ary ny buffalo. Ary tsy izany ihany, fa io koa no toeram-ponenan'ireo razambentsika. Raha ny marina, ny fôsily hominin voalohany dia hita teto.
Manohy any Afrika izahay, amin'ity indray mitoraka ity any amin'ny Lohasahan'ireo Mpanjaka. Izy io dia nekropolis iray izay mipetraka eo akaikin'i Luxor. Eto dia nipetraka indray ireo farao tamin'ny tarana faha-1922, faha-1979 ary faha-XNUMX. Tao no nahitan'i Howard Carter ny fasan'i Tutankhamun tamin'ny XNUMX, ary am-polony taona vitsivitsy taty aoriana, tamin'ny XNUMX, dia nambara fa Tapak'andriamanitra.
Ankehitriny, mandray ny fiaramanidina izahay ary mankany amin'ny sisintany atsimon'i Utah miaraka amin'i Arizona, any Etazonia. Eto amin'ity toerana ity, ny mahery fo dia tsy zavamaniry, na biby, fa sangan'asa voajanahary. Sary sokitra vato noforonin'ny rivotra, izay nanomboka nitsoka an-tapitrisany taona maro lasa izay ary mandraka ankehitriny dia manohy manova ny asany. Azo antoka fa rehefa mandeha ianao, dia ho mahazatra anao tokoa ny nahita an'io tamin'ny sarimihetsika andrefana.
Izy io dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra azonao jerena any Etazonia. Ny lohasaha Yosemite dia lohasaha glacial any California voahodidin'ny ala sy tendrombohitra, izay teny an-dalana dia rakotra fotsy isaky ny ririnina. Izy io koa dia heverina ho toerana misy ny vakoka manerantany, nanomboka tamin'ny 1984, satria raha rehefa avy mandehandeha eny amin'ny araben'i Kalifornia ianao dia mila zavatra milamina ... Azoko antoka fa tsy ho sarotra aminao ny hiala amin'ity toerana mahafinaritra ity.
Manohy any California izahay, mitsidika lohasaha iray manodidina ny 225 kilometatra ny halavany ary 8 ka hatramin'ny 24 kilometatra ny sakany. Tsy mety ho an'ireo tsy mahazaka mari-pana loatra izany, satria mora mihoatra ny 45ºC ny mercury. Raha ny marina, nandritra ny taonjato lasa dia voasoratra ny mari-pana mahafinaritra 56ºC, indrindra ny 7 Jolay 10. Ka raha sahy mandeha ianao, aza adino ny mitondra rano, «sunscreen» ary satroka.
Fa raha aleonao mandeha amin'ny zoro miaraka amin'ny toetrandro mafana, dia andao isika hankany Hawaii. Ny lohasahan'i Waipi'o (indraindray soratana koa Waipio) dia miorina ao amin'ny distrikan'i Hamakua, amoron'ilay nosy lehibe. Rakotry ny natiora tropikaly mazàna ary nandroin'ny rano mangarahara izay manasa milomano. Aza adino anefa ny elo, satria matetika be ny orana amin'ity faritra ity.
Raha tia natiora ianao ary te hahita ala izay tsy nametrahan'ny marika marika firy ny olona, ​​tonga ny fotoana hitodi-doha mankany Borneo, hamaranantsika ny diantsika. Ity lohasaha mahavariana ity dia any amin'ny 83km atsimo andrefan'ny Lahad Datu. Ao amin'ny tahiry ala iray izay mandrakotra velarantany 440km2 mivantana karazam-borona 250 mahery, pantera rahona tsara tarehy, macaque ary orang utan, Anisan'ireo biby maro hafa, afaka mifandray amin'ny natiora mbola tsy nisy toy izany ianao.
Tianao ve ny fitsangatsanganana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Inona ireo lohasaha lehibe indrindra eto an-tany?
Malahelo anao aho Tafí avy any amin'ny lohasaha Arzantina, ao amin'ny faritanin'i tucumán. Ity no lohasaha faharoa lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, izy io no ho lehibe indrindra raha toa ka mamoaka ny pelao izay eo afovoan'ny lohasaha izy ireo. Izy io koa dia iray amin'ireo manintona mpizahatany eto amin'ny faritany!